NANG KYAR OO (နန်းကြာဦး): 2015
သင့်အိမ်ထောင် သာယာအောင် အောက်ပါအတိုင်းဆောင်....
( ludi ထံမှ.. ကူး.ယူသည်။)
Posted by Kosai Wanna at 18:25 No comments:
လိင်တူ လက်ထပ်ခြင်းနှင့် ပက်သက်သော..
Posted by Kosai Wanna at 17:50 No comments:
ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသော ထာဝရဘုရားသခင်
သမ္မာကျမ်းစာထဲ၌ များစွာသောကျမ်းပိုဓ်များအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ကြောင်း(သို့ )
မပြောင်းလဲကြောင်း(သို့ )တည်တံ့ခိုင်မြဲကြောင်း ဖော်ပြထား၏။
ဆာလံ ၁၀၂း၂၆-၂၇
ထိုအရာတို့သည် ပျက်စီး ခြင်းသို့ရောက်သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် အမြဲတည်တော်မူ၏။ ထိုအရာရှိသမျှတို့သည် အဝတ်ကဲ့သို့ ဟောင်း နွမ်းခြင်းသို့ရောက်၍ ကိုယ်တော်သည် ဝတ်လုံကိုလဲသကဲ့သို့လဲတော်မူသဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်း ရှိကြသော်လည်း၊ ကိုယ်တော်သည် ပြောင်းလဲတော်မမူပါ။
ဆာလံ ၃၃း၁၁
ထာဝရဘုရား၏ ပြဌာန်းတော်မူခြင်းသည် ကာလအနန္တနှင့်ဆိုင်၍ စိတ်နှလုံးတော်၏ အကြံ အစည်တို့သည် သားစဉ်မြေးဆက် အဆုံးတိုင်အောင် တည်ကြလိမ့်မည်၊၊
မာလခိ ၃း၆
ငါသည်ထာဝရဘုရား ဖြစ်၏။ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ။ ထိုကြောင့် ယာကုပ်အမျိုးသားတို့၊ သင်တို့သည် ဆုံးရှုံးခြင်းသို့မရောက်ကြ။
ရှင်ယာကုပ် ၁း၁၇
ထိုအဘသည် ရွေ့လျော့ တိမ်းယိမ်းခြင်းမရှိ၊ ပြောင်းလဲခြင်းအရိပ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်များနှင့် ပက်သက်၍၊ ဘုရားသခင်သည် မပြောင်းမလဲတည်ရှိနေခြင်း၊ အကြောင်းအား
များစွာသော ကျမ်းပိုဒ်များအရ၊ ပြောဆိုစရာအကြောင်းရှိ၏။ ဘု၇ားသခင်၏ သဘောသဘာဝအား ပြောင်းလဲစေရန်ဘယ်သူမှမွမ်းမံ၍မရ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်တော်၊ ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်
ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်မှုသည်ပြောင်းလဲ၍မရ။ ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း၊ ဘုရား
သခင်၏ သဘောသဘာဝအရ၊ သူသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိ၊ ပြောင်းလဲ၍မရ။
တောလည်ရာကျမ်း ၂၃း၁၉
ဘုရားသခင်သည် မုသာစကားကို ပြောအံ့သောငှါ လူဖြစ်တော် မူသည်မဟုတ်။ နောင်တရအံ့သောငှါ လူသားဖြစ်တော်မူသည် မဟုတ်။ မိန့်တော်မူပြီးမှ၊ စကားတော်အတိုင်း မပြုဘဲနေတော်မူမည်လော။ ဂတိထားတော်မူပြီးမှ၊ ဂတိတော်မတည်ဘဲ နေတော် မူမည်လော။
ဘုရားသခင်သည်၊ ဘယ်တော့မှမုသာမပြော။ (စိတ်မပြောင်း) ဘုရားသခင်သည်ပေးထားသော ကတိတော်
တို့ ကိုလည်း ဘယ်တော့မှမဖျက်ကြောင်း၊ ကျမ်းစာထဲက ဖော်ပြထား၏။အကြောင်းမူကား ကတိတော်
မတည်ခြင်းက ဘုရားဇာတိ မဟုတ်။ လူ့ ဇာတိကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ယနေ့ လူသားများ
မုသာ(လိမ်လည်)ပြောဆိုနေခြင်းသည် ဇာတိမကုန်သေးကြောင်း တွေ့ ရပါသည်။ သို့ သော် ကျွန်တော်
တို့ အသက်တာတွင် ဘုရားသခင်အုပ်စိုးမှုများလာသောအခါ၊ မုသာပြောဆိုခြင်း၊ သစ္စာမရှိခြင်း၊ ကတိမ
တည်ခြင်းများ လျှော့နည်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အသက်တာသည် ဘုရားသခင်
( ဆက်ရန် ) SMT..
Posted by Kosai Wanna at 19:18 No comments:
အလုပ်မရှိသော စာတန်..(ဟာသ သက်သက်ပါ )
အသင်းတော် တစ်ခုမှ လူငယ်တစ်ယောက် တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှေက်နေစဉ်တွင်၊ ဘေးနားသို့ 
အမည် သူစိမ်းတစ်ယောက် ကပ်ပါလာသည်ကို သတိထားမိလိုက်ပါသည်။ လူငယ်သည် သူစိမ်းကို
တချက်ကြည့်ပြီး စတင်မိတ်ဆက်သည့် အနေဖြင့် ....
လူငယ် ။ ။ နောင်ကြီး နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ?
သူစိမ်း ။ ။ စာတန် လို့ ခေါ်တယ်။
လူငယ် ။ ။ ခရစ်ယာန်တွေရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းကြီးပဲ။
သူစိမ်း ။ ။ ရန်သူ မဟုတ်ဘူးလား?
လူငယ် ။ ။ ထာဝရဘုရားပြီးရင်၊ ခင်ဗျား ကိုသူတို့ တွေက ပါးစပ်ဖျားက မချကြဘူးလေ။
လူငယ် ။ ။ စာတန် ဆိုတော့ သင်းအုပ်ဆရာတွေပြောသလို အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေမှာပေါ့ ?
သူစိမ်း ။ ။ မရှုပ်ပါဘူး။
လူငယ် ။ ။ ဘာလို့ ..?
သူစိမ်း ။ ။ ကျွန်တော် စာတန် ဆိုတဲ့ကောင်တောင် ပါစရာမလိုဘူး၊ ခရစ်ယာန်တွေ သူ့ တို့ အချင်းချင်း
ဖြစ်နေတာနဲ့ ၊ ၀င်ပါစရာမလိုတော့ဘူး။
လူငယ် ။ ။ ...............?
Posted by Kosai Wanna at 23:31 No comments:
မေးခွန်း: ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံသောခရစ်ယာန်ဟူသည် အဘယ်နည်း?
အဖြေ: ။ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံသော ခရစ်ယာန်ဟူသည် အဘယ်နည်း။ ဤမေးခွန်းကို ယောဟန် ၃း၁-၂၁ ၌ ဖော်ပြထားသော အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရာအားဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားသော ဖာရိရှဲ၊ စိန်ဟဲဒရင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သော (ယုဒလူတို့တွင်အရာရှိ) နိကောဒင်ထံ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ စကားပြောခဲ့သည်။ နိုကောဒင်သည် ညဉ့်အချိန်တွင် သခင်ယေရှုထံလာခဲ့သည်။ နိကောဒင်သည် သခင်ယေရှုထံ မေးခွန်းမေးမြန်းရန်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
သခင်ယေရှုက နိကောဒင်အား ဤသို့ပြောခဲ့သည်။“ဒုတိယမွေးခြင်းကို မခံသောသူမည်သည်ကား ဘုရား သခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မမြင်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်။ နိကောဒင်ကလည်း အသက်ကြီးသောသူသည် မွေးခြင်းကို အဘယ်သို့ခံနိုင်ပါမည်နည်း။ အမိဝမ်းထဲသို့တဖန်ဝင်၍ မွေးခြင်းကိုခံနိုင်ပါမည်လောဟု လျှောက်၏။ ယေရှုကလည်း ရေနှင့် ၀ိညာဉ်တော်မမွေးသောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့မ၀င်ရဟု ငါအမှန်အကန်ဆို၏။ ဇာတိပကတိမွေးသောအရာသည် ဇာတိပကတိဖြစ်၏။ ၀ိညာဉ်တော်မွေးသောအရာသည်ဝိညာဉ်ဖြစ်၏။ဒုတိယမွေးခြင်း ကိုခံရမည်ဟု ငါပြောသည်ကို အံ့သြခြင်းမရှိနှင့် ……….“ (ယောဟန်၃း၃-၇)
“ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း စကားစုသည် ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် မွေးဖွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ နိကောဒင်သည် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံရန်တောင့်တခဲ့သည်။ သူသည် ၀ိညာဉ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သောသူ၏ နှလုံးသားပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သည်။ အသစ်သော မွေးဖွားခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းသည် ယုံကြည်သောသူတို့အပေါ်တွင် ထာဝရအသက်ပေးအပ် ခြင်းအမှုဖြစ်သောဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။တနည်းအားဖြင့်ယုံကြည်သောသူတို့အား ထာဝရအသက် ပေးအပ်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်။ (၂ကော ၅း၁၇၊ တိတု ၃း၅၊ ၁ပေ၊ ၁း၃၊ ၁ယော၊ ၂း၂၉၊ ၃း၉၊ ၄း၇၊ ၅း၁-၄၊ ၁၈)။ ဒုတိယမွေးခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ရသော အခွင့်ကိုရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဟု ယောဟန် ၁း၁၂၊၁၃ထဲတွင် ညွှန်ပြထားသည်။
“လူတစ်ယောက်သည် အဘယ့်ကြောင့်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရန် လိုအပ်သနည်း” ဟူသောအတွေးအခေါ်ဆန် သည့် မေးခွန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါသည်။ တမန်တော်ပေါလုက ဧဖက် ၂း၁ ထဲတွင် “ထိုဒုစရိုက်အပြစ်၌ သေလျက်ရှိ သောသင်တို့ကိုပင် ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်စေတော်မူပြီ“ ဟုဖော်ပြထားသည်။ ရောမမြို့၌ရှိသော ယုံကြည်သူ များထံ“အဘယ့်ကြောင့်နည်းဟူမူကား လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အသားရေပျက်ကြပြီ”(ရောမ၊၃း၂၃)ဟုတမန်တော်ကဆိုထားပါသည်။ထို့ကြောင့်လူတစ်ယောက်သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိရန်နှင့် ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာရဖွဲ့ခြင်းအခွင့်ရရှိရန် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရန် လိုအပ်ပါသည်။
မည်သို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံရနိုင်မည်နည်း။ ဧဖက် ၂း၈-၉ ထဲတွင် ”ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကို ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှကြွားဝါစရာအခွင့်မရှိ။” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ လူတစ်ယောက်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရလျှင် ဒုတိယမွေးခြင်းကို ခံခြင်း၊ ၀ိညာဉ်တော်၌ အသစ် ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်ခြင်းအခွင့်ရရှိသည်။ ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အသေခံချိန်တွင် ပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုပေးဆပ်ပေးခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်ကိုးစားခြင်း သည်ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ဒုတိယမွေးခြင်း ကိုဆိုလိုသည်။ ထို့ကြောင့် လူမည်သည်ကား ခရစ်တော်၌ရှိလျှင် အသစ်ပြုပြင် သောသတ္တ၀ါဖြစ်၏……..” (၂ကော၊ ၅း၁၇) (က))။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို အသက်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်လက်ခံ ကိုးစားခြင်းမရှိလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားထဲ၌ စကားပြောသည်ဟု မိတ်ဆွေသည် ခံယူနိုင်မည်လော? မိတ်ဆွေသည်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရန်လိုအပ်သည်။ယနေ့မိတ်ဆွေသည် နောင်တ ရရှိရန် နှင့်အသစ်ပြုပြင်သော သတ္တ၀ါဖြစ်ရန်ဆုတောင်းလိုသလား။ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သော သူတို့အား ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသော အခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ ထိုသားတို့မူကား လူမျိုးနှင့် စပ်ဆိုင်၍ဖွားသောသား မဟုတ်။ မေထုန်သံဝါသအားဖြင့် ဖွားသောသားမဟုတ်။ လူအလိုအလျောက်ဖွားသောသားမဟုတ်၊ ဘုရားသခင် ဖွားတော်မူသောသားဖြစ်သတည်း (ယောဟန် ၁း၁၂-၁၃)။
မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံလို၍ ဒုတိယမွေးခြင်းကို လိုလျှင် ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမပါပဲ ဆုတောင်းခြင်းသို့မဟုတ် တခြားဆုတောင်းခြင်းက မိတ်ဆွေကိုမကယ်တင်နိုင် သည်ကိုမှတ်ထားပါ။ ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကသာ မိတ်ဆွေကိုအပြစ်နွံထဲမှ ကယ်တင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်းခြင်းသည် မိတ်ဆွေက ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြောင်းနှင့် သူပြင်ဆင်ပေးထားသော ကယ်တင် ခြင်းတရားအတွက် ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ကို ပြစ်မှားကြောင်းနှင့် ထိုအပြစ်တရားအတွက် တရားစီရင်ခြင်းပြစ်ဒဏ်ကို ကျွန်ုပ်သည် ခံထိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ကျွန်ုပ်ခံထိုက်သော ပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သခင်ယေရှုကယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရပါ၏ ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ဒုစရိုက်နွံမှ ရုန်းထွက်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ကိုယ့်တော့်ကို ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ အံ့ဖွယ်သောကျေးဇူးတော်တရားနှင့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရား၊ ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးတော်အတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏! အာမင်!
Posted by Kosai Wanna at 16:37 No comments:
အဖြေ: ထာဝရအသက်လမ်းကို သမ္မာကျမ်းစာက တိကျစွာဖော်ပြထားပါသည်။ ပထမအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သောအပြစ်သားဖြစ်ကြောင်းကို အသိအမှတ်ပြုရမည်။ “အဘယ်ကြောင့်နည်း ဟူမူကား၊ လူအပေါင်းတို့သည် ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ အသရေပျက်ကြပြီ။” (ရော၊၃း၂၃)။ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အရာဟူသမျှသည် ဘုရားသခင်ကို ၀မ်းနည်းစေခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဒဏ်ခံထိုက်သူ များဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးက ထာဝရဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရ အပြစ်ဒဏ်ကို ခံထိုက်သောသူများဖြစ်သည်။ “အပြစ်တရား၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ကျေးဇူးတော်ကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။” (ရော၊ ၆း၂၃)
သို့သော် အပြစ်ကင်းမဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်(၁ပေ၊၂း၂၂)၊ ထာဝရဘုရားသခင်၏ သားတော်(ယော၊၁း၁,၁၄) သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုပေးဆပ်ရန် အသေခံခဲ့ပါသည်။ “ငါတို့သည် အပြစ်ရှိစဉ်ပင် ခရစ်တော်သည် ငါတို့အတွက်ကြောင့် အသေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်တော်မူ သည်ကို ငါတို့အား ထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏” (ရော၊ ၅း၈)။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ၍ (ယော၊ ၁၉း၃၁-၄၂)၊ ကျွန်ုပ်တို့ခံထိုက်သောအပြစ်ကြွေးအားလုံးကို သူ ယူဆောင်သွားခဲ့သည် (၂ကော၊ ၅း၂၁)။ သုံးရက်မြောက် သောနေ့တွင် သူသည် သေခြင်းမှထမြောက်၍(၁ကော၊၁၅း၁-၄) သူသည် အပြစ်တရားနှင့် သေခြင်းတရားကို အောင်မြင်ခဲ့ ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ “သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကြီးစွာသော ဂရုဏာတော်နှင့်အညီ ငါတို့ကို တဖန်သွားစေတော်မူ၏။(၁ပေ၊၁း၃)။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ `ရုန်းထွက်နိုင်၍ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ခရစ်တော်ထံသို့ ပြန်လှည့်လာ၍ရပါသည်။ (တ၊၃း၁၉)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်၍ သူသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေးအားလုံးပေးဆပ်ရန် အသေခံသည်ဟု ယုံကြည်ကိုးစားလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိပြီး ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံရမည်ဖြစ်သည်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကိုယုံကြည်သော်သူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တပါးတည်းသော သားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင် အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။” (ယော၊ ၃း၁၆)။ “အဘယ်သို့နည်းဟူမူကား၊ သင်သည် သခင်ယေရှုကို နှုတ်ဖြင့် ၀န်ခံ၍ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကိုသေခြင်းမှ ထမြောက်စေတော်မူပြီဟု စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယုံကြည်လျှင်၊ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်” (ရော၊ ၁၀း၉)။ ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် ခရစ်တော်ပြုခဲ့သော အမှုကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသာလျှင် ကောင်းရာသုခဘုံသို့ ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သော လမ်းသွယ်ဖြစ်သည်။ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ကယ်တင်ခြင်း သို့ရောက်ရ၏။ ကိုယ်အလိုအလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်။ ဘုရားသခင်သနားတော်မူရာဖြစ်သတည်း။ ကိုယ် ကုသိုလ်ကြောင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်သည်မဟုတ်။ သို့ဖြစ်၍ အဘယ်သူမျှ ၀ါကြွားစရအခွင့်မရှိ” (ဧ၊ ၂း၈၊၉)။
မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလိုလျှင် ဤသို့ဆုတောင်းပါ။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိပဲ ဤ ဆုတောင်းကိုရွတ်ဆိုခြင်းသည်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ တခြားဆုတောင်းခြင်းကို မြွက်ဆိုခြင်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ကယ်တင်ခြင်း မရရှိနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်က အပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤဆုတောင်း ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ကြောင်းဖော်ပြသော ဆုတောင်းခြင်း၊ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးသော ကယ်တင်ခြင်းအတွက် သူ့ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောခြင်းသာဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော်ရှင်ဘုရားသခင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ကိုပြစ်မှား၍ သေခြင်း ပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်သိရှိပါ၏။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အပြစ်ကြွေးအားလုံးကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပါ၏်။ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်သည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရခဲ့ပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် အပြစ် ဒုစရိုက်ကို ကျော်ခိုင်းပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ၏။ ကိုယ်တော်၏ အံ့သြဖွယ်ရာ ကျေးဇူးတော်နှင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားဖြစ်သော ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးအတွက် ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏။! အာမင်!
ဤနေရာတွင်မိတ်ဆွေဖတ်ခဲ့သောအကြောင်းအရာကြောင့်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲသလား? ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့လျှင်“ယနေ့ခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်လက်ခံခဲ့ပါပြီ”ဟူသော စကားစုကို နှိပ်ပါ
Posted by Kosai Wanna at 23:032comments: